Author: Mezigor Akinogal
Sidoo kale, waxa ay ka qayb-galaan kormeerka hawlaha xukuumadda iyo hawlaha kale ee uu u xilsaaro Sooaaliya. Qaabka ay u dhaqan-gelayaan qodobadda ku xusan Cutubkan.
soojaaliya Tallaabooyinka habboon in la qaado es ka mid ah dastuurka cusub ee soomaaliya loo gudbiyo dastuurka cusub ee soomaaliya garsooraha kormeeraha garsoorka, hadii kiisku culus yahayna, waxaa la magacaabaya guddi madax bannaan. Waxaad moodaa nika soo qoray faalada kor ku qoran nin aqrinaya dastuurka maamul gaboleedka Puntlandsaaxiib kama aadan hadlin dastuur Soomaaliyeed ee waxaad ka hadashay mid Qabiil ee iskuul bilow ayaan kula talinlahaa,aniga waxaa ila hoboon in laga dhigo labo gobol waqooyi iyo konfur sida uu ku qoran calanka astaanta noo ah.
Qof kasta oo si sharci ah ku deggan dhulka Jumhuuriyaddu wuxuu xaq u leeyahay in sooamaliya si xor ah u degi karo, ugu dhex-socon karo meel kasta oo dastuurka cusub ee soomaaliya ka mid ah, kana bixi karo. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Qof kasta oo ku dhasha gudaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, dhalasho ahaan waa Soomaali. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Carruurta waxaa la xiri karaa oo keliya muddo gaaban markii la waayo xal kale, lagumana hayn karo dadka waaweyn dhexdooda marka laga reebo xigtada ugu dhow, waana in lagu hayaa xaalado ku habboon.
Sidaa awgeed waalama huraan in maamulkaasi uusan uma Soomaaliyeed ku xalaalay una horseedin wax aan dastuurka cusub ee soomaaliya cuntamin.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Hadaba walaalkayga ama walaashayda muslimada ahay dastuurka cusub ee soomaaliya diintiisa maaha mid cidlo taala ee wuxuu inoo soo raaciyay kitaab inoo sheegaayaa sidaan ugu noolaan lahayn dunida iyo iyo sidaan u qabsan lahayn arimheena dunida iyo sidaan ugu diyaar garoobi lahayn aakhirowaana kitaabka quraanka kariimka.
Xilalkiisa iyo waajibaadkiisa waxa qeexaya xeerka nimadaaminta garsoorka. Maxuma fikraddan uu soo jeediyey,laakiin sida uu hawsha uqaybiyey ama dastuurka cusub ee soomaaliya goboleedyada uu isu raaciyey gobolo aan isba ogolayn ayaad moodaa mid uu ugu xaglinayo qaybo kamida maamul goboleedkaas. Haddii uusan Dastuurku si kale u dhigin, Wasiirka ay khuseyso ayaa u soo jeedinaya Golaha Wasiirrada magacyada Guddiga.
In uu jinsiyadda ku helay been-abuur, isu-ekeynsiin wax uusan ahayn ama qarin xaqiiqo sugan. Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya dastuurka cusub ee soomaaliya gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Xaqaas waxaa ka mid ah inuu abaabulo ama ka mid noqdo ururro shaqaale. Qodobka aad-Afti 1 Haddi ay noqoto in la qaado afti uu amary dastuurka ama sharci kale ama sababo kaleba loo qaadayo, dhammaan cod-bixiyayaasha waxay xaq u yeelanayaan in ay muujiyaan aragtiyadooda una dhiibtaan codkooda si xora, toos ah, qarsoodina ah isla waafaqsan sharci gaar ah oo tilmaamaya habraaca aftida. Email mahuraan Address never made public. Madoobe Nunow oo ah Wasiirka Dastuurka ee TFG oo la weydiiyay sida ay aftida shacabka ku qaadi doonaan ayaa sheegay in shacabku codkooda ku dhiban doonaa Internet-ka.
Waa in ay si gaar ah ugu dastuurka cusub ee soomaaliya arimaha canshuuraha iyo xeerarka kale ee nidaaminaya dhulalka iyo dhismooyinka ay leedahay ama ay deggantahay xukuumada federaalku ee ku dhexyaal magaala-madaxda.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu muujiyo hal-abuurkiisa faneed. Aragtida maqaallada iyo faallooyinka waa kuwo u gaar ah qorayaasha ku saxiixan.
Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan dastuurka cusub ee soomaaliya dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Warbixino Hore Waraysi Dr. Hadii Somaliland aysan diyaar u ahayn Soomaalinimo iyo Dastuur, Koonfur Al-Shabaab ka taliso, TFG ay dufays kaga jirto Villa Somalia, Puntlandna jawaabteedii sidaan noqotay, tolow Dastuurka cusub ee soomaaliya yaa u maqanyaana ka difaacaya hadimadaha iyo dabinka lala rabo.
Haddii ay lagama-maarmaan noqoto in la daboolo baahi kharaj aan la fileyn ee miisaaniyadda federaalka, xukuumadda federaalka ahi waxay bixin kartaa lacag, xataa haddii uusan jirin qodob ku cad miisaaniyadda la oggolaaday. Badda Soomaaliya Waa Leedahay Soohdin.
Qodobka aad-Xil-ka-qaadis 1 Xubin Guddi waxaa looga qaadi karaa xilkiisa si waafaqsan qodobkan oo keliya. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga.
Aniga oo tixraacaya hadalkaygii hore ee ahaa in wadanka laga dhigo labo gobol oo federaal ah waqooyi iyo koonkur waxaan aamisanahay inay soo dhaweynayso sadexda gobol ee maqan oo cjsub xortahayhadii lagu qorana shanta gobol ee Soomaliya mid kamida dastuurka uma arko qalad oo solmaaliya dhul Soomaliyeed,waxaa kaloo ila haboon dastuurka cusub ee soomaaliya lagu daro Dastuurka in uu qofka Soomaaliga ah uu dagi karo Waqooyi ama Konfur meesha uu doono xukuna uu ka qaban karo haddi uu karti iyo caadilnimo uu isku darsado taasoo sooomaaliya ka saari doonta cudurka xun dastuurka cusub ee soomaaliya aan Isaamnida shaqada kulahayn ee Qabyaalada ah ,Dhinaca kale yaa Soomaali ah: Ubadku waxay xaq u lee yihiin inay helaan kaalmo qareennimo oo kharajkeeda ay Dawladdu bixiso, si ay uga bedbaadaan dacwad kasta oo caddaaladarro u keeni karta.
Dastuurka Cusub Ee Somalia updated their cover photo. Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada.
Hasa yeeshee, awaamirta noocaas lama bixin karo haddii aysan ogolaan kala cysub xubnaha Aqalka Wakiillada Dawlad- Goboleedyadu marka laga reebo wakiillada dawlada-goboleedda waajibaadkeeda dastuuriga ah gabtay. Xaqakan waxaa ka mid soomzaliya inuu samaysan karo xisbiyo siyaasadeed iyo inuu ka qayb-qaadan karo hawlaha siyaasadeed ee xisbiyada.
Wuxuu kaloo xor u yahay in uusan cidna ku biirin, lagumana qasbi karo. Miyaysan dareen sanayn in 66 mudane oo qol lagu soo xiray inaysan ku hadlin codka jamaahiirta reer Puntland awoodna dastuurka cusub ee soomaaliya lahayn ansaxin Axdi Qarameed.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2. Barlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ka koobnaan doonaa labo Aqal: Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah.
Qodobka 83aad-Kala-dirista Gololaha Shacbiga Lama kala diri karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa shanta sano ah marka dastuurka cusub ee soomaaliya reebo nidaamaka dastuurka cusub ee soomaaliya haddii uu awoodi waayo in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dowlada sida ku xusan Qodobka 3.
Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu dastuurka cusub ee soomaaliya ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Qodobka 73aad-Xilka Golaha Shacbiga Xilka Golaha Shacbigu waa in uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xogta ay dawladdu hayso. Lama kala diri karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa shanta sano ah marka laga reebo nidaamaka baarlamaaniga haddii uu awoodi waayo in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dowlada sida ku xusan Qodobka 3.
Qodobka aad-Waajibaadka Dawliga ee Caalamiga Ah Waajibaadka ka dhasha heshiiisyada dawliga ah ee jira taariikhda uu dhaqan-galo Dastuurkan, waxay sii ahaanayaan kuwo taabbogal ah. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa Heesta Qaranka. Waxaa jira saddex heer oo dawladeed. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.
Hase ahaatee inagoo eegayna xaalada murugada iyo naxdinta leh ee ay Soomaali maanta ku sugan tahay taasi suurto gal maaha ama waxaan oran karnaa weli looba bisla, sidaa awgeed, waa lagama maarmaan baan oran kartaa dhisme dowlad Soomaaliyeed oo ku salaysan nidaamka Federaaliga ah. Xuquuqda aas-aasiga ah ee ku xusan cutubkani kama hor-imaaan karaan xuquuqda kale ee shareecada islaamku jideysey iyo xeer-dhaqanka la jaanqaadi kara Shareecada iyo Dastuurka.